၀ ယ်ယူရေးသတိပေးချက် - TÜLOMSAŞမီးသတ် ၀ န်ထမ်း ၀ န်ထမ်းဝယ်ယူမှု - RayHaber
« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လောင်စာဆီဝယ်ယူပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: TCDD Led ဆီမီးပစ္စည်းဝယ်ယူရေး »
တူရကီအဆိုပါကန်ထရိုက်တာစက်ခေါင်းများနှင့် MOTOR စက်မှုလုပ်ငန်း
န်ဆောင်မှုများ၏ကန်ထရိုက်တာမီးသတ်သမားဝန်ထမ်းရေးရာန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဝယ်ယူရေးပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 448033
က) လိပ်စာ: Ahmet ပျံရိပ်သာလမ်း 26490 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2222240000 - 2222257272
ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: tulomsas@tulomsas.com.t
လူတွေနှင့်အတူရက်စွဲများအကြား 11 01.01.2020-31.12.2020 (အမျိုးသားရေးပွဲတော်များနှင့်အထွေထွေအားလပ်ရက်အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပါလိမ့်မည်)
ခ) Place: စစ်ဆင်ရေး, အုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အအုံများ, အလုပ်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံရုံများတည်ဆောက်, လူမှုရေးအဆောက်အဦးများ, တည်းခို၏ဧရိယာ၌တည်ရှိသောအဆိုပါကန်ထရိုက်တာအထွေထွေညွှန်ကြားမှုစက်ရုံ; သငျသညျရထားလမ်းလင့်များနှင့်ရေးဆွဲမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူရထားလမ်း TULOMSAS လယ်ကွင်းအနီးတည်ရှိသောစက်ရုံများကိုဆွဲဆောင်အပေါ် TCDD ၏အသိပေးစာယူကြပြီဆိုပါကရထားလမ်းမော်တော်ယာဉ်များ, ယာဉ်ရပ်နားအများကြီးပွင့်လင်းလယ်ကွင်းကားဆွဲခြင်းနှင့်ဆွဲယူလာရသည်ဟုဝန်ဆောင်မှုယာဉ်များ; အဖွဲ့အစည်းများအပြင်ဘက်အရေးပေါ်အခြေအနေများ TULOMSAS ဌာနချုပ်နှင့်ဒေသများရှိလုပ်ဖို့အရာရောက်စွက်ဖက်သို့မဟုတ်ရေဖြည့်စွက်အညီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အကူအညီများ protocol ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏အဖွဲ့အစည်းများနှင့်တရားရုံးများခေါ်ဆိုခ၏Eskişehirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မီးဘေးအပျေါမှာဝယ်လိုအား Eskisehir ဝန်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။
က) အဆိုပါနေရာအရပ်: အဆိုပါကန်ထရိုက်တာ, ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဦးစီးဌာန
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 10.10.2019 - 14: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မီးသတ်သမားဝန်ထမ်းရေးရာန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေး (TÜLOMSAŞ) 04 / 10 / 2017 မီးသတ်သမားဝန်ထမ်းရေးရာန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေး TULOMSAS စက်ခေါင်းတူရကီနှင့် MOTOR SAN ။ / န်ဆောင်မှုများဝယ်ယူ supply DB TULOMSAS မီးသတ်ဝန်ထမ်းရေးရာန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဝယ်ယူရေးပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 479873 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Ahmet ပျံရိပ်သာလမ်း 26490 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİRခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2222240000 - 2222257272 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: tulomsas@tulomsas.co ငါ နုက) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်၏ https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-service ကိုဘာသာရပ်: .tr ဃ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် 11 ကလူ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆိုပါကန်ထရိုက်တာမီးသတ်သမားဝန်ထမ်းရေးရာန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေး 01 / 11 / 2017 အဆိုပါကန်ထရိုက်တာမီးသတ်သမားဝန်ထမ်းရေးရာန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေး TULOMSAS စက်ခေါင်းတူရကီနှင့် MOTOR SAN ။ / န်ဆောင်မှုများဝယ်ယူ supply DB TULOMSAS မီးသတ်ဝန်ထမ်းရေးရာန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဝယ်ယူရေးပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 537249 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Ahmet ပျံရိပ်သာလမ်း 26490 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİRခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2222240000 - 2222257272 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: tulomsas@tulomsas.co ငါ နုက) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်၏ https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-service ကိုဘာသာရပ်: .tr ဃ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် 10 ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မီးသတ်သမားဝန်ထမ်းရေးရာ Service ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် (TÜLOMSAŞ) 26 / 01 / 2016 မီးဝန်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းရေးရာ TULOMSAS အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုငှားရမ်း၏ကန်ထရိုက်တာမီးသတ်သမားဝန်ထမ်းရေးရာန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ် 4734 အပိုဒ် 19 အညီပွင့်လင်းတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2016 / 12085 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Ahmet ကြက်မွေးမြူရိပ်သာလမ်း 26490 Tepebasi / ESKİŞEHİRခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်:0(222) 224 00 00 / 4435 - 4436 -0( 222) 225 50 60 - 225 72 72 ဂ) E-Mail ကလိပ်စာ: tulomsas@tulomsas.com.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါသည်: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-နူးညံ့သော ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မီးသတ်သမားဝန်ထမ်းရေးရာ Service ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် (TÜLOMSAŞ) 04 / 11 / 2016 မီးဝန်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းရေးရာအဆိုပါကန်ထရိုက်တာစက်ခေါင်းတူရကီနှင့် MOTOR SAN လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ / န်ဆောင်မှုများဝယ်ယူ supply DB TULOMSAS မီးသတ်ဝန်ထမ်းရေးရာန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဝယ်ယူရေးပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2016 / 460442 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Ahmet ပျံရိပ်သာလမ်း 26490 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİRခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2222240000 - 2222257272 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: tulomsas@tulomsas.co ငါ နုက) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်၏ https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-service ကိုဘာသာရပ်: .tr ဃ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် 10 ကလူ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မီးသတ်သမားဝန်ထမ်းရေးရာ Service ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် (TÜLOMSAŞ) 13 / 12 / 2016 မီးဝန်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းရေးရာအဆိုပါကန်ထရိုက်တာစက်ခေါင်းတူရကီနှင့် MOTOR SAN လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ / န်ဆောင်မှုများဝယ်ယူ supply DB TULOMSAS မီးသတ်ဝန်ထမ်းရေးရာန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဝယ်ယူရေးပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2016 / 545929 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Ahmet ပျံရိပ်သာလမ်း 26490 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİRခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2222240000 - 2222257272 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: tulomsas@tulomsas.co ငါ နုက) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်၏ https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-service ကိုဘာသာရပ်: .tr ဃ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် 10 ကလူ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မီးသတ်သမားဝန်ထမ်းရေးရာန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေး (TÜLOMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မီးသတ်သမားဝန်ထမ်းရေးရာ Service ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် (TÜLOMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မီးသတ်သမားဝန်ထမ်းရေးရာ Service ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် (TÜVASAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မီးသတ်ဝန်ဆောင်မှုဧည့်ခံ (TÜVASAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အထွက်မီးသတ် Truck ကားများအတွက်လမ်းမကြီးပြီးတော့ရထားဧည့်ခံ